Google Adsense yeFeed | Martech Zone
Google Adsense yeFeed
Mugovera, Nyamavhuvhu 4, 2007 Svondo, Nyamavhuvhu 19, 2007 Douglas Karr
Kana chikafu chikavhurika uye chikaita chikumbiro chemufananidzo, Google zvine simba inoshandura iyo mufananidzo pane iyo nhunzi. Izvi zvinofanirwa kuitwa nenzira iyi kuti ugone kudzora bhajeti reMushambadzi. Mune mamwe mazwi, kana ndine bhajeti yemadhora zana - pandinoshandisa iyo bhajeti kumusoro, imwe seti yezviziviso inofanirwa kupihwa kune anotevera munhu anovhura chikafu.
Chinhu chimwe chinoshamisira kusarudzwa kweBlogger kana Inofambiswa Rudzi. Nei paine chero zvipingaidzo kune yakasarudzika chikuva? Pane zvipingamupinyi here? Zvinoita kunge tekinoroji iyi inogona kuwedzera kune chero RSS-inogoneswa saiti. Kana iri yeGoogle, hapana yakawandisa ruzivo runowanikwa pane yavo saiti.
Ndiri kutarisira kunyoresa kuAdsense yeFeed kana yawanikwa. Kana iwe uine chero rumwe ruzivo - ndokumbira upe imwe mhinduro mune zvakataurwa.